Yaa Ku Bixinaya? | Martech Zone
Arbaco, Juun 19, 2006 Arbaco, Juun 20, 2016 Douglas Karr
Mararka qaarkood waxaan ilaawnaa inaan ugu dambeyntii mushahar ka helno macaamiisheena. Tom Peters wuxuu leeyahay qoraal weyn maanta oo ku saabsan GM oo ka socda GM, Mike Neiss:
“Fiiri, waxaan dareemayaa xumaan saaxiibadeyda iyo asxaabteyda [GM]. Laakiin uma damqanayo iyaga. Way iloobeen naqshaddii, waxay iloobeen macmiilkii, waxay iloobeen R&D, waxay iloobeen inay yihiin shirkad [baabuur]. Dhimashadooda ayaa si cad u ahayd doorasho. Maaha calaamad muujinaysa dhaqaalaheenna, laakiin waa xulasho lagu sameeyay qolka guddiga ee [GM]… Waa neefsashadii ugu dambeysay ee shirkad hafanaysa.
Rajada kaliya ee aan qabo waxay tahay inay daraasad kiis u noqon doonaan dhamaan ururada rajaynaya inay weynaadaan sida [GM]. Burburkii weynaa ayaa sii adkaaday. ”
Ku beddel [GM] meheraddaada iyo [baabuurka] wershadahaaga. Ma jiraan wax wadaag ah?